Kedu ọrụ dị elu SEO iji mee ka m nwee ike ịzụ ahịa?
Ịme ihe ndị bụ isi nke njikarịcha search engine abụghị ọrụ siri ike, ọbụlagodi ndị nwe ụlọ ahịa na-ahụ maka azụmahịa. Dịka ọmụmaatụ, inwe SEO gị na WordPress bụ ihe dị mfe - dịka ịwụnye otu plugins, ma ị nọworị na nri dị mma n'ebe ahụ. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ịnwere mkpa dị oke mkpa ị ga-emesị gaa ọkwa ọzọ na ọrụ SEO dị elu? O di nwute, n'okpuru ebe a, m ga ekwu maka ufodu uzo ozo iji me ka okporo ahia gi di ka dynamite. Ya mere, ka anyị nwee nchịkọta dị mkpirikpi nke ọtụtụ ọrụ SEO ndị ọzọ dị elu na aro ndị ọzọ dị elu, nke nwere ike ịba uru dị ukwuu maka azụmahịa ịntanetị gị.
Data Research User
Ee, njikwa ihe nyocha nke kachasị mma bụ ihe ndị ọkachamara, aghaghị m ikweta. Ka o sina dị, ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke SEO bụ ịchọta ndị ahịa ị chọrọ iji zute ha. Ime ya na ọdịnaya dị mma, ị ga-enwe ohere ka mma na ndị ọbịa ga-eme ka ikikere ziri ezi ka emesịa ghọọ ndị ahịa n'ezie. Ekwenyere m na ụzọ kachasị mfe iji mara mkpa na ebumnuche nke ndị na-ege gị ntị ga-agwa ndị mmadụ okwu. Ị ghaghị ime ihe iji nweta nghọta kachasị mma ndị mmadụ na-achọ. N'ime ihe kachasị m mma ma jiri ya mee ihe atụ, ana m akwado ịga eleta ntanetị dị n'ịntanetị maka ajụjụ & azịza, dị ka Quora, Reddit ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ. Iji mụtakwuo banyere ndị na-ege gị ntị, ị nwere ike iji nlezianya nyochaa njirimara nke Google na-amụ ya na ụfọdụ ngwaọrụ dị ka AnswerThePublic, KeywordTool, wdg.M n'aka na ị ga-ahụ ha bara uru.
Na-arụ ọrụ na peeji nke ọdịda
Ibe ọdịda gị dị ezigbo mkpa, ebe ọ bụ na ha bụ naanị ihe onye ọrụ ahụ zutere naanị mgbe ịchọtachara SERPs. Uzo akwukwo ozo nwere ike inwe nnukwu ohere nke ichota otutu ndi mmadu anya. Nke a bụ ndepụta dị mkpirikpi nke ọrụ SEO dị iche iche iji mee ka ebe ndị na-egbu egbu:
na-amalite ịmepụta ebe ọ bụla ị ga-ebute ọdịda dị na mkparịta ụka dị ogologo ogologo;
na-arụ ọrụ nke ọma na H1, H2, H3 utu aha, ma mekwaa nkọwa meta na gị iche isiokwu;
nwere ogologo ederede nke ọ dịkarịa ala 2,000 okwu maka ọdịda gị maka ohere kacha mma ka Google gosipụta gị;
anaghị etinye aka na nkwụnye ego ụfọdụ na ntanetị weebụ, nke ga-eme ka ahụmịhe nchọgharị nke ndị ọrụ gị dị mma, ma si otú a mee ka okporo ụzọ na mgbanwe dị mma karị;
tinye akwụkwọ gị ọdịda na ụfọdụ ezi nyocha, ma echefula banyere mma njikọ ụlọ.
Weghachite Afọ Gị
Na-ele ọrụ SEO kasị elu na-enyekarị site na ụlọ ọrụ dijitalụ nchịkọta zuru ezu, ihe dị elu na-achọkarị otu ndi otu ndi okachamara ihe omumu nyere ndi ahia aka. Ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịgba mbọ, ị nwere ike iweghachite ọdịnaya gị dị ọhụrụ. Nke a bụ ezi ihe nlereanya m na-eji egwuriji m blog posts. Naanị m na-akwụ ụgwọ oge iji ghọta ihe akụkụ nke ihe odide ederede m kwa ụbọchị nwere ike gbanwee nke ọma. Ị nweere onwe ịhọrọ nhọrọ ọ bụla n'ime nhọrọ ndị a iji mee ka ọdịnaya gị dịkwuo elu ma na-enye nkọwa maka ndị ọrụ: infographics, PDF faịlụ, Ngosipụta vidiyo na Nkuzi, Pọdkastị, yana ịkwalite nrụgide na ọdịnaya ọdịnaya gị Source .